साझाबाट अलगिएर विवेकशीलले किन कठोर बाटो रोज्यो ? (भिडियाे)
काठमाडौँ । बैकल्पिक शक्तिको रुपमा उभिएको घोषणा गरेको विवेकशील साझा दल १६ महिना अघि मात्र एक भएर राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आएको थियो । साझा पार्टीमा जोडिएको विवेकशीलका संयोजक उज्ज्वल थापाको
ओली पक्षीय सांसदको आलोचना : मन्त्रीनै मन्त्री जस्ता छैनन्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तर आलोचना खेपिरहेको छ । गति सुस्त भएको मात्र होइन स्पष्ट योजना नभएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट असन्तुष्टि सुनिन्छ । पार्टीले जिम्मेवारी दिएका
काँग्रेसका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताको आवाज कसरी सम्बोधन गर्नेछन् :गोकर्ण पौडेल (भिडियो)
काठमाडौँ । कांग्रेस महासमिति बैठकको बन्दसत्र शनिबारदेखि सुरु भएको छ । पार्टीको रणनीति, संशोधित विधान लगायतका विषयमा छलफल गर्न तीन दिने बन्दसत्र सुरु भएको हो । बन्द सत्रमा कांग्रेस केन्द्रीय
काँग्रेस महासमिति बैठक – नेतालाई गाली ,कार्यकर्तामा खुशीयाली !
काँग्रेस कोमामा गएर होकि प्रतिपक्ष जस्तो बोल्दैन । बोलेपनि गतिलो गरी बाल्न सक्दैन भन्ने आरोप काँग्रेसजनकालागि च्वास्स खोच्ने काँडा हो । तर यो सत्य भएकाले सहनु बाहेक अरु विकल्प पनि
काँग्रेसको आक्रोस अव सडक र सदनमा : बद्रि पाण्डे (भिडियो)
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस भित्रको आन्तरीक विवाद चल्दै अाएकाे छ । नेपाली काँग्रेस पार्टिमा दुई धार देखिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसको भुमिका इतिहास मै कमजोर रहेको गुणासो आउन थालेको
पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक छलफल र गृहकार्य विनै पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु गलत
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि (नेकपा) यति बेला विवादमा परेको छ । नेकापा दुई ओटा विषयमा विवादमा परेको हो । एउटा भखरै भएको एसिया प्यासिफिक समिट र अर्को पार्टिभित्रको आन्तरिक
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यस्तो छ किचलो (भिडियाे)
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का २२ केन्दि«य सदस्यले ६ बुदे ज्ञपन पत्र पार्टिलाई बुझाएपछि राजनितीमा तरङगको विषय बनेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा १२ वर्ष,दन्द्ध पीडित जनताले के पाए ? (भिडियाे)
काठमाडाैँ । नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको पनि १२ वर्ष पुगेको छ । वि.स. २०६३ मंसीर ५ गते आजकै दिन माओवादीको ततकालीन विद्रोही पक्ष र सरकाबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।